Kodzero-dzevanhu, 22 Gunyana 2017
Dare Rinoti Nyaya yeMDC-T Haisi Ingatongwe Chimbichimbi
Dare repamusoro rakatura mutongo wekuti nyaya yakakwidzwa kudare neMDC-T ichida kuti kunyoreswa kuri kuitwa vanhu sevavhoti kumbomiswa kudzamara komisheni inoona nezvesarudzo yarongeka haifanire kunzwikwa nechimbichimbi.
Zimbabwe Inotenga Ndarama yeBond Coins kuSouth Africa?
Gwaro rine Studio7 rinoratidza kuti mari iyi yakadhindwa nekambani yeSouth African Mint Company, uye kambani iyi yakazivisa mukuru anoona nezvekufambiswa kwemari kubhanga guru renyika neChitatu, Professor Kuveya.
Sangano reVakarwa Hondo reZNLWVA Rotungamirwa neZvikwata Zviviri?
Mutauriri wechikwata chaVaMutsvangwa, VaDouglas Mahiya vanoti zvakaitwa izvi zvinozvidza vakarwa hondo yerusunguko vose, sezvo zviri kuitwa nevanhu vavanoti vari kushandiswa nechikwata chevanhu vari muZanu PF che G40.